ဖြူဖြူကျော်သိန်း အတူ ရိုက်ထားတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေကို မကြာခဏ ဆိုသလိုတင်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ကျော်ထက်အောင် – Cele Top Stars
January 12, 2021 By admin2Knowledge
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ကျော်ထက်အောင် ကတော့ Myamar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကြီးရဲ့ Host တစ်ဦး အဖြစ် အခုချိန်အထိ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။ သြဇာရှိပြီး တည်ကြည် ပြတ်သားတဲ့အသံမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျော်ထက်အောင်က ပွဲတစ်ခု လုံးရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစား နိုင်စွမ်းရှိသူဆိုရင်လည်းမမှာပါဘူးနော် ။ ဒါ့အပြင် ကျော်ထက်အောင်က အရပ်ရှည်ပြီး ယောက်ျား ပီသတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ် တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူထား နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျော်ထက်အောင်ကအခုဆိုရင်လည်း ကြော်ငြာ တွေလက်ခံရိုက်ကူးသလို ခေါင်းဆောင် မင်းသား အဖြစ်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးတွေမှာပါဝင် ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျော်ထက်အောင်ရဲ့သရုပ်ဆောင် ရည်အချင်းကိုလည်း ပရိသတ် တွေက နှစ်သက်အားပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလော မှာတော့ ကျော်ထက်အောင်က အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေကို မကြာခဏ ဆိုသလို တင်ပေးနေတာကြောင့် အားလုံးက အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း ကျော်ထက်အောင် တစ်ယောက် Live လွှင့်နေတုန်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးက “အစ်ကိုတော် သာသနာ့ဘောင် ထဲဝင်မယ်ပြောပြီး Couple ပုံတွေအရမ်းတင်တယ်နော်” လို့ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျော်ထက်အောင်က “ပုထုဇဉ်ပီပီ သာသနာ့ဘောင် ထဲမဝင်ခင် ပျော်မွေ့ရတာပေါ့” ဆိုပြီး (၁၁)မိနစ်နဲ့ (၃၇) စက္ကန့်လောက်မှာ ရယ်ရယ် မောမောနဲ့ စနောက်ပြီး ပြန်ဖြေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် ကျော်ထက်အောင်ရဲ့Live ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။ ဖတ်ရှုပေးတဲံချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်….။
Source & Video Credit-“Kyaw Htet Aung-Idol” FB Page
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. ကြျောထကျအောငျ ကတော့ Myamar Idol သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကွီးရဲ့ Host တဈဦး အဖွဈ အခုခြိနျအထိ ဆောငျရှကျ ပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော ။ သွဇာရှိပွီး တညျကွညျ ပွတျသားတဲ့အသံမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကြျောထကျအောငျက ပှဲတဈခု လုံးရဲ့အာရုံကို ဖမျးစား နိုငျစှမျးရှိသူဆိုရငျလညျးမမှာပါဘူးနျော ။ ဒါ့အပွငျ ကြျောထကျအောငျက အရပျရှညျပွီး ယောကျြား ပီသတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားနဲ့ မိနျးကလေးပရိသတျ တှရေဲ့စိတျဝငျစားမှုကို ရယူထား နိုငျတာ ဖွဈပါတယျ ။
ကြျောထကျအောငျကအခုဆိုရငျလညျး ကွျောငွာ တှလေကျခံရိုကျကူးသလို ခေါငျးဆောငျ မငျးသား အဖွဈလညျး ရုပျရှငျဇာတျကား ကွီးတှမှောပါဝငျ ရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ကြျောထကျအောငျရဲ့သရုပျဆောငျ ရညျအခငျြးကိုလညျး ပရိသတျ တှကေ နှဈသကျအားပေးကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ လတျတလော မှာတော့ ကြျောထကျအောငျက အဆိုတျော ဖွူဖွူကြျောသိနျး အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ စုံတှဲပုံလေးတှကေို မကွာခဏ ဆိုသလို တငျပေးနတောကွောငျ့ အားလုံးက အရမျးကိုစိတျဝငျစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော ။
အခုတဈခါမှာဆိုရငျလညျး ကြျောထကျအောငျ တဈယောကျ Live လှငျ့နတေုနျး သူ့ရဲ့ ပရိသတျတဈဦးက “အဈကိုတျော သာသနာ့ဘောငျ ထဲဝငျမယျပွောပွီး Couple ပုံတှအေရမျးတငျတယျနျော” လို့ပွောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ကြျောထကျအောငျက “ပုထုဇဉျပီပီ သာသနာ့ဘောငျ ထဲမဝငျခငျ ပြျောမှရေ့တာပေါ့” ဆိုပွီး (၁၁)မိနဈနဲ့ (၃၇) စက်ကနျ့လောကျမှာ ရယျရယျ မောမောနဲ့ စနောကျပွီး ပွနျဖွခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျ တှအေတှကျ ကြျောထကျအောငျရဲ့Live ဗီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော ။ ဖတျရှုပေးတဲံခဈြပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော….။
မင်းသားကသူအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးပြောလာတဲ့ နန်းစုရတီစိုး